Iveze imininingwane yokuqala ye-Samsung Galaxy Note 8 | Izindaba zamagajethi
Uma ngonyaka odlule ekugcineni wafuna ukuvuselela i-Note yakho endala, kulo nyaka konke okumele ukwenze ukulinda ngoba, wake waqinisekisa ukuthi inkampani yaseNingizimu Korea AbakwaSamsung bazokwethula i-Galaxy Note 8 entsha nokuthi usevele uyasebenza ngokugcwele, manje sesivezelwe imininingwane emisha mayelana ne-terminal elandelayo.
Lolu lwazi luza kithi luvela ku "ovuzayo" odumile u-Evan Blass osizakale ngesipikha esihle esiyiphrofayili yakhe ku-Twitter ukumemezela ngendlela engahlelekile ukuthi I-Samsung's Galaxy Note 8 izotheleka kamuva, ngoSepthemba, ngentengo engaba yinkulungwane yama-euro. Kepha thula!, Njengoba esho, "ungayi okwamanje, kusekhona okunye."
1 Ukugxumela ku-Galaxy Note 8
2 Esikwaziyo nge-Galaxy Note 8 elandelayo
Ukugxumela ku-Galaxy Note 8
Ngonyaka odlule, inkampani enkulu yezobuchwepheshe i-Samsung yanquma ukweqa izinombolo zama-Olympic ngokwethula i-Galaxy Note 7. maphakathi nehlobo. ukwehluleka kwaba sezingeni lomlando.
Kungekudala ngemuva kokwethulwa kwayo emazweni anjenge-United States neSouth Korea, okuyizwe lakubo, abanye abasebenzisi baqala ukubika okungajwayelekile amacala okuqhuma nemililo okushiye isikhumulo sigcwele amalangabi, senza ukuxubana kwezinto, futhi, ngezikhathi ezithile, sithinte ezinye izakhiwo: izimoto, amakhaya ... Amacala ayanda futhi inkampani yamemezela ukumiswa nokususwa kwamatheminali, okuzongena esikhundleni sawo emisha futhi ngaphandle kwezinkinga. Kushiwo futhi kwenziwa kodwa, kuyaziwa vele ukuthi ukushesha akukuhle futhi lapho kuthunyelwa okwesibili inkinga yaqhubeka. Iziphathimandla zaqala ukusebenza kwathi i-Galaxy Note 7 yaze yavalwa nasezindizeni ezazithengiswa ngenxa yobungozi bayo kwezokuphepha komphakathi. Ekugcineni, AbakwaSamsung baphoqeleka ukuthi bakumise okwesibili ukwenziwa nokukhangisa kwabo, manje, unomphela.
I-Samsung Galaxy Note 7 ibifile, kepha hhayi uchungechunge lwe-Galaxy Note. Ngakolunye uhlangothi, ekuqaleni kwalo nyaka kwaqinisekiswa lokho AbakwaSamsung bazokwethula amanye amayunithi "avuselelwe" weGalaxy Note 7 emazweni afana neNingizimu Korea ngentengo ephansi cishe ngama-25%, into, ngendlela, sekuzokwenzeka. Inhloso beyikabili: ukufaka isandla ekunakekelweni kwemvelo ngokukhipha izinto ebezigcinwe ngaphandle kokwazi kahle ukuthi zenzeni ngazo, nokuthola ingxenye yotshalo-mali olwenziwe esigungwini esihlulekile.
Futhi kusuka kwenye indawo, AbakwaSamsung baqala ukusebenza kumlandeli wemvelo endaweni yokugcina "eqhumayo", i-Galaxy Note 8,Esazi eminye imininingwane manje ngenxa yokuhlunga okwenziwe ngu-Evan Blass ngephrofayili yakhe ye-Twitter @evleaks.
Esikwaziyo nge-Galaxy Note 8 elandelayo
Njengoba abasebenzisi abaningi bebevele becabanga, i-Galaxy Note 8 elandelayo izodla ifa lezinye zezici esivele sizibona kwi-Galaxy S8 ne-Galaxy S8 Plus ephumelelayo. Into ehlaba umxhwele kakhulu ukwamukelwa kwalowo mqondo wesikrini "i-Infinity Display", okuhle iphaneli ye-AMOLED egobile kabili ezinhlangothini zalo ezingaba nosayizi we- 6,3 amayintshi no-18,5: 9 aspect ratio.
Kodwa-ke, i-Galaxy Note 8 izoba, kuze kube manje, i-terminal enobunikazi bayo ngakho-ke, naphezu kokufana kwayo ne-S8 ne-S8 Plus, izophinde izame ukuziqhelelanisa nabo, hhayi kuphela ngokuhlanganisa lokho osekuvele kudumile S Pen, kepha futhi nangokucaciswa okufana ne- ikhamera embaxambili enezinsimbi eziyi-12 zamamegapikiseli nokuzinza okubonakalayo. Eceleni kwabo kuzoba ne-flash bese kwesokudla sayo, inzwa yezigxivizo zeminwe. Lokhu kungaba yindlela yokuqeda "impikiswano" ebangelwe ukutholakala kwesifundi seminwe ochungechungeni lwe-S8.
Ngaphakathi, sizothola i-terminal enamandla impela ngokusebenza okuhle kakhulu ngenxa yokuthi izobahlanganisa Amaprosesa weQualcomm Snapdragon 835 noma ama-Exynos 8895 (kuya ngemakethe esikuyo), noma kunjalo Imemori ye-RAM izokwenyuselwa ku-6 GB. Futhi konke lokhu kusekelwa yi 3.300 mAh ibhethri.
Izofaka futhi i- umsizi we-virtual bixby futhi ukwethulwa kwayo kuzokwenzeka ngemuva kwesikhathi kunokuba bekulindelwe, ngandlela thile ngoSepthemba, ngenhloso enkulu yokumelana nemodeli entsha ye-iPhone, ezophinde ikhishwe ngalezo zinsuku, yingakho intengo yayo ingaba ngama-euro angama-999, Ngaleyo ndlela ibanikeza umehluko omncane wedivayisi ye-premium.
Vele, akukho kulokhu okusemthethweni, noma kunjalo, irekhodi lempumelelo likaBlass lisimema ukuthi sithathe imininingwane yakhe ngokungathi sína.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Kudalulwe imininingwane yokuqala ye-Samsung Galaxy Note 8
Sebenzisa ukuthengiswa kweSteam namathiphu okuthi ungafi uzama